मौद्रिक नीतिप्रति आशावादी नेप्से लगानीकर्ता - Naya Patrika
मौद्रिक नीतिप्रति आशावादी नेप्से लगानीकर्ता
सोमबारसम्म ओरालो लागिरहेको नेप्से परिसूचकमा मंगलबार सुधार देखिएको छ । बजार खुलेको करिब १ घन्टासम्म ओरालो लागेको नेप्से त्यसपछिको समयमा भने बढ्न थालेको थियो । यस दिनको बजारलाई मौद्रिक नीतिले प्रभावित पारेको छ ।
असारको पहिलो साता प्रस्तुत हुने भनिएको मौद्रिक नीतिप्रति लगानीकर्ताहरू आशावादी देखिएका छन् । मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेन्डिङको विषयमा सम्बोधन गर्ने विषयले लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । ब्रोकरहरूबाट मार्जिन कर्जा प्राप्त गर्ने नीति पारित गर्ने कुराले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको एक ब्रोकरले बताए । यसका साथै बैंकहरूले दिने सेयर धितोमा कर्जा बढाउने हल्लाले पनि बजारलाई सकारात्मक दिशा दिन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा विकासका कामहरू तीव्र रूपमा हुन थालेको छ । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको रकम वित्तीय प्रणालीमा आएका कारण बजारमा लगानीयोग्य पुँजी सहज भएको छ । लगानीयोग्य पुँजी सहज भएपछि बैंकहरूको ब्याजदर घट्छ । यसले पनि पुँजीबजारलाई सकारात्मक दिशा दिन मद्दत गर्दछ । मंगलबार नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ५५ अंक बढेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशमलव ९५ अंक बढेर २ सय ६१ दशमलव ११ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन १ सय ७० कम्पनीको ५ हजार ३ सय १२ पटकको कारोबारमा रु. ४३ करोड ६८ लाख ८६ हजार ८ सय २९ बराबरको ११ लाख ७६ हजार ४ सय ९१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेर रु. १४ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३३ दशमलव १९ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नबिल बैंकको संस्थापक सेयर अगाडि रहेको छ । यस दिन सो बैंकको रु. ३ करोड ८५ लाखभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री भएको छ । सेयर संख्याका आधारमा सिभिल बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ भने कारोबार संख्याका आधारमा मेगा बैंक नेपाल अगाडि रहेको छ । सिभिलको यस दिन १ लाख १५ हजार ८ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ भने मेगाको २ सय २७ पटक सेयर कारोबार भएको छ ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्स र नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सको सेयरमूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत बढेको छ । एभरेष्ट बैंकको परिवर्तीय अग्राधिकार सेयरको मूल्य भने करिब १० प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको १ सय ७० कम्पनीमध्ये यस दिन ९८ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ५३ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १९ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ । मंगलबार वित्त, विकास बैंक र व्यापार समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक बढेको छ ।
यस दिन होटेल समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव ३५ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ६५ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव ४१ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, अन्य समूहको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, जलविद्युत्् समूहको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको व्यापार समूहको परिसूचक १ दशमलव ४६ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव २ प्रतिशत घटेको छ ।
बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडले असार २८ गते कुण्डलिनी दरबार बैंकेट चन्डोलमा तेइसौँ वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने भएको छ । सभाको विशेष प्रस्तावमा १३ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापक समूहका तर्फबाट ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने रहेको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि बैंकले असार ८ गतेदेखि २८ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
बेस्टको अवितरित हकप्रद बाँडफाँट
बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले जेठ २५ गते अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीले वैशाख ३१ देखि जेठ ८ गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत खरिद आह्वान गरेको अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले संस्थापक समूहको ७५ हजार ३ सय ४० कित्ता सेयर बाँडफाँट गरेको हो । बाँडफाँटमा नपरेको सेयरबापतको रकम जेठ २८ गतेदेखि फिर्ता भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सेन्ट्रलको अवितरित हकप्रद बाँडफाँट
सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले जेठ २५ गते अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीले जेठ १४ गतेदेखि जेठ २१ गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत खरिद आह्वान गरेको अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले संस्थापक समूहको ९ लाख ८१ हजार ७ सय ८ दशमलव ७२५ कित्तामध्ये ५ लाख २५ हजार ४ सय कित्ता बाँडफाँट गरेको हो । बाँडफाँटमा नपरेको सेयरबापतको रकम जेठ ३० गतेदेखि फिर्ता भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
ग्रिनको अवितरित हकप्रद बाँडफाँट
ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले जेठ २७ गते अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीले जेठ १० गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत खरिद आह्वान गरेको अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले संस्थापक समूहको ३ लाख १३ हजार ७ सय १३ कित्ता बाँडफाँट गरेको हो । बाँडफाँटमा नपरेको सेयरबापतको रकम जेठ २९ गतेदेखि फिर्ता भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
#नेप्से #मौद्रिक नीति